ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက တရုတ်နိုင်ငံမှ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး အသစ်တစ်သုတ် လက်ခံရရှိ - Xinhua News Agency
ဖနွမ်းပင်၊ ဇူလိုင် ၂၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက Sinopharm ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး အသစ်တစ်သုတ်အား ကြာသပတေးနေ့တွင် လက်ခံရရှိခဲ့ရာ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း လုပ်ငန်းများကို အရှိန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းလုပ်ငန်းများကို ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်က စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယခုအခါ လူပေါင်း ၆.၃၃ သန်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ဇူလိုင် ၂၂ ရက်က ထပ်တိုးကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ၈၁၁ ဦး ရှိခဲ့ရာ စုစုပေါင်းအတည်ပြုလူနာ ၇၀,၄၁၉ ဦး၊ သေဆုံးသူ ၁,၁၈၈ နှင့် ပြန်လည်ကျန်းမာလာသူ ၆၂,၅၇၇ ဦး ရှိကြောင်းံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းများအရ သိရသည်။ (Xinhua)
PHNOM PENH, July 23 (Xinhua) — Cambodia on Thursday receivedanew batch of China’s Sinopharm COVID-19 vaccines, boosting its vaccination campaign,alocal health official has said.
Cambodia launched its anti-COVID-19 vaccination drive on Feb. 10. So far, 6.33 mln people have been inoculated in Cambodia.
The country reported 811 new COVID-19 cases on Thursday, pushing its national total to 70,419 with 1,188 deaths and 62,577 recoveries, according to the health ministry.